Android droid (အစိမ်းရောင်စက်ရုပ်) ရဲ့နာမည်ကဘာလဲမသိဘူးလား။ | Linux မှ
Android droid (အစိမ်းရောင်စက်ရုပ်) ရဲ့နာမည်ကဘာလဲမသိဘူးလား။
လူအများကအဲဒါကိုသိကြတယ် အန်းဒရွိုက်, ထို OS ကိုအလွန်ရင်းနှီးသောဆွေမျိုး Linux ကိုအောင်မြင်မှုကြီး (အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့သည့် 2011 ခုနှစ်, ဖတ်ပါ Android, 2011 ၏ OpenSource အသေးစိတ်အတွက်) နှင့်နေ့တိုင်းသူကပိုနောက်လိုက်ရရှိသည်။
သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်၊ စိမ်းလန်းသော Droid စက်ရုပ်ကိုသိပြီးအလွန်အမင်းအေးမြ။ အေးအေးဆေးဆေးနှင့်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် ... ဒီထူးခြားတဲ့သူငယ်ချင်းလေးရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုတာငါ့ကိုမပြောဘူးလား။ 😀
ဥပမာအားဖြင့်, KDE အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နဂါးရှိသော်လည်း၎င်း၏အမည်မှာမနဂါး"မဟုတ်"KDE", သူ့နာမည်က Konqui.
ကောင်းတယ်… android စက်ရုပ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ 🙂
နှစ် ဦး စလုံးနာမကိုအမှီ အန်းဒရွိုက် (android စပိန်ဘာသာဖြင့်) အဖြစ် Nexus One အားဖြင့်ဝတ္ထုရည်ညွှန်း ဖိလိပ္ပုသည် K. ဒစ်ခ် Androids သည်လျှပ်စစ်သိုး၏အိပ်မက်လော။နောက်ပိုင်းတွင်အဖြစ်ရုပ်ရှင်အဘို့အအဆင်ပြေအောင်ခဲ့သည် Blade ကို Runner။ စာအုပ်နှင့်ရုပ်ရှင်နှစ်မျိုးလုံးသည် androids အမည်ရှိအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအာရုံစိုက်သည် ပွား Nexus-6 မော်ဒယ်
Google တွင်အလုပ်လုပ်ရန်သွားသော Android ပူးတွဲတည်ထောင်သူများထဲတွင် အန်ဒီ Rubin က (အန္တရာယ်တွဲဖက်တည်ထောင်သူ)၊ ကြွယ်ဝသောသတ္တုတွင်း (Wildfire Communication, Inc ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ)၊ Nick sears (အစဉ်အဆက် VP အတွက် T-Mobile), နှင့် WebTV interface ကို၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦး ဆောင်သူခရစ် White က။
ပြီးတော့ငါကဒီရယ်စရာကလေးငယ်ရဲ့နာမည်ကိုပြောပြီး (ရဲရင့်စွာရေးပြလိုက်တယ်) ။ 😀
ပျော်စရာကောင်းတာပေါ့။ …။ ဟားဟား။
အဘယ်အရာကိုမျှငါ၏ကြီးမားသောပန်ကာမိပါတယ် အန်ဒီ နှင့် အန်းဒရွိုက်ငါနှင့်အတူစမတ်ဖုန်းဝယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိသော်လည်း အန်းဒရွိုက်ဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမထားပါနဲ့။ ငါသူတို့ပရိသတ်တွေအများကြီးပဲ။ 😀
တကယ်တော့ထုတ်ကုန်တစ်ခုအနေနှင့် ... ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သို့မဟုတ်အခြားဂူဂဲလ်ဝန်ဆောင်မှုများထက်များစွာ ပို၍ နှစ်သက်သည်။ 🙂
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Android droid (အစိမ်းရောင်စက်ရုပ်) ရဲ့နာမည်ကဘာလဲမသိဘူးလား။
သင်ဤ post ကိုလုပ်နေတာသင်ပျော်ခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်၊ ငါအရမ်းသဘောကျတယ်;) ။ Salu2
Hehe ... Android နဲ့ Safari ကိုသုံးမယ်
၎င်းသည် UserAgent ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် Android တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်
အစဉ်မပြတ်ငါလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါ ... ဒါပေမယ့်အဆုံးမှာတော့ငါတခြားသူတွေလုပ်ခဲ့တယ်
ငါ droid ၏နာမကိုသိရန်စိတ်ကူးအားဖြင့်အလွန်သဘောကျမိပါတယ် ... တကယ်တော့ငါအလွန်ရယ်စရာ hahahahahaha
Samsung Galaxy S II ကိုဝယ်ပြီး Android ကိုနှစ်သက်တယ်။ အံ့သြစရာ
T_T ... ငါငိုနေတယ် ... ဟင့်အင်း၊ ငါက S II လိုချင်တယ်။ တကယ်တော့ Android 2.2 ဒါမှမဟုတ်အထက်ရှိတဲ့သူတိုင်းအတွက်ငါအခြေချလိမ့်မယ် T_T …🙁
ပြီးတော့ ... မင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုရောင်းပြီးနောက်တစ်ခုဝယ်မယ်။
ရဲစွမ်းသတ္တိ၊ သူငယ်ချင်း၊ ငါ KZKG နှင့် ELAV ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသိကျွမ်းခဲ့တယ်။ အကယ်၍ မင်းကအရမ်းလွယ်လွန်းရင်သူကမင်းကိုတိုင်ကြားလိမ့်မယ်လို့မယုံဘူး၊ ထိုအခါငါဖိုရမ်၏ခွင့်ပြုသည့်ခေါင်းစဉ်များ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်ဖို့မပိုပြောပါ ...
မြေကြီးကိုဆန့်ကျင်။ သင်ပြောနိုင်သည် -
« Mama mama၊ မကောင်းတဲ့ကလေးငယ်တွေကငါ့ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကိုခိုးယူပြီးငါ့ကိုရိုက်နှက်တာပါ BUAAAAAAAAAA BUAAAAAAAA BUAAAAAAAAA »
ဒါကြောင့်သူတို့ကအခြားဟဟဟ်ဟဟကို ၀ ယ်ကြတယ်
ဟHAHA !!!!!! LOL မရှိလမ်း !!!!
မင်းနဲ့မတူဘူး ၁၇ နှစ်အရွယ်မိခင်ရဲ့ကောင်လေးဟဟားဟား။
သတ္တုတွင်းသည်ဒေါ်လာ ၅၀ ထက်မပိုသော၊ Android (၂.၂ နှင့်အထက်) ရှိသည့်တစ်ခုသည်ထိုငွေထက်နှစ်ဆကျော်ကုန်ကျသည်
Mmm …ဟုတ်ကဲ့! ငါအနှစ်သက်ဆုံးကတော့ ၂.၁ ။ ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကတော့ Froyo နဲ့ Ginger တို့ထက်နည်းနည်းအပိုင်းပိုင်းခွဲထားတယ်။ ငါ့အရသာအတွက်အဲဒါပိုကောင်းတယ် စကားမစပ်ငါ Galaxy S use ကိုသုံးတယ်
Android သည် genenial ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် minigalaxy ရှိပြီး၎င်းတွင်ရှိသော application အရေအတွက်သည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်။ အားနည်းချက်ကတော့ Gnu / Linux နဲ့လုံးဝနီးပါးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်။
Android Mascot ကိုအန်ဒီအစားစတိဗ်ဟုခေါ်သင့်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည် iOS / Apple / iPhone / Jobs တို့ကပိုသောအားဖြင့် cyberpunk-themed ဝတ္ထုများထက်မှုတ်သွင်းခံသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မှတ်တမ်းအတွက်ငါရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်၊ စာအုပ်ဖတ်တယ်၊ ငါက Android သုံးစွဲသူပါ၊ ဒါပေမယ့်ဒါကငါ့ကိုမပျော်ဘူး
Palm OS ကိုမြင်ဖူးလား။ ... hehe, သင်က Palm အဟောင်းနှင့် iOS ၏အရာများမည်မျှဆင်တူသည်ကိုသင်မြင်တွေ့ရလျှင်သင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။
ငါမှာ Palm တစ်ခုရှိတယ်၊ တကယ်တော့သူကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကမှဆက်သွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆက်သွယ်မှုမရှိသေးပေမယ့်အလုပ်လုပ်နေတုန်းပဲ။ ဒါကြောင့်မင်းပြောနေတာကိုငါသိတယ်။ ဒါပေမယ့် Google ကပိုပြီးပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပဲ။
သို့တိုင်ယနေ့ iOS ပြပွဲများ၏အင်္ဂါရပ်များစွာကို Apple ကမတီထွင်ခဲ့ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဆမ်ဆောင်းနှင့်အတူ (အပြောင်းအလဲအတွက်) အငြင်းပွားဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ (iOS တွင်သင်ဆန့်ကျင်ဘက် ဦး တည်ချက်ရှိမီနူးသို့မဟုတ်အိုင်ကွန်များကိုခုန်ထွက်စေသောအရာတစ်ခုခု၏အဆုံးသို့ရောက်သည့်အခါထိုခုန်ပေါက်ခြင်းဖြစ်သည်) ဒီဟာကသူတို့တီထွင်ခဲ့တာပဲ၊ သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးပဲဆိုတာ Samsung ရဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုတာဘာလဲသိလား။ …ရိုးရိုးလေး၊ သူတို့ဟာ iPod / iPhone မတိုင်မီကြာမြင့်စွာကပင် (PC) ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုကိုယူလာခဲ့ကြပြီး၊
မည်သည့် ဦး စားပေးမှုများသို့မဟုတ်တစ်ယူသန်ဆန်မှုမှကင်းဝေးပါကကျွန်ုပ်သည် Bada, Android တွင်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ထင်ရှားခြင်းများ (ယေဘူယျ (သို့) မဟုတ်) iOS တွင်တွေ့ရသောအရာနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်ကိုကျွန်ုပ်အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
WTF? ကျွန်ုပ်၏ချစ်သူ / အစ်ကို / ပန်းသီးလိုလားသူလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်သည် Android အသုံးပြုသူဖြစ်ပါသလား။ အိုအိုအိုကျွန်တော်မသိပါ
ကောင်းပြီ၊ မင်းအရင်က Motor Xoom လှိုင်းကြီးရှိတယ်ဆိုတာမင်းသိပြီထင်တယ် ... ငါသိတဲ့လူကိုငါအပြစ်မတင်ပါဘူး! ထို့အပြင်ငါသံသယရှိစရာမလို, သူမ၏ထံမှသင်တို့ကိုငါဖြေကြားပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် - Google က Apple ၏ Webkit ကို၎င်း၏ပုံမှန် browser အတွက် jejwje အတွက်မည်သို့အသုံးချခဲ့သည်ကိုလေးစားပါ။
Palm haha ​​ကိုရှာဖွေရန်ခဲယဉ်းသည်။ ၎င်းသည်အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့သည့်ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်
ကောင်းပြီ၊ ကြည့်စမ်းပါ၊ မသိဘူး…စကားမစပ် Google က Motorola Mobile ဝယ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ရပြီဆိုတာမင်းသိလား။
ဟုတ်ကဲ့။ ငါကြားခဲ့တယ်။ ထို့အပြင်ယခုကွန်ဂရက်စ်ကဂူဂဲလ်အားသူတို့ဘာကြောင့် Safari အသုံးပြုသူများကို "စောင့်ကြည့်နေတယ်" ဆိုတာကိုရှင်းပြရန်တောင်းနေသည်။ ejejejejeje အခုတော့ Microsoft ကသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ privacy ကိုချိုးဖောက်တယ်လို့ပြောလိုက်ရုံပဲရှိသေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါနောက်တစ်ခုကထိုက်တန်ပါတယ်၊
ဒီလူတွေရှိတဲ့ရဲရင့်ခြင်းကိုငါနှစ်သက်တယ်။ သူတို့ဟာကလပ်အသင်းတွေရဲ့မျက်နှာတစ်ခုပါ။ မည်သည့်ကျင့်ဝတ်ဖြင့် Apple သို့မဟုတ် Microsoft က Google အား privacy ကိုချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲသနည်း။ သူတို့အားလုံး (ဂူဂဲလ်အပါအ ၀ င်) ကအခါအားလျော်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဆက်လက်ပြုလုပ်သည်။
သင့်မှာစမတ်ဖုန်းမရှိရင် android operating system ပါတဲ့ Alcatel ကိုဝယ်ပါ၊ အဲဒါဟာအသက်သာဆုံးကံကြမ္မာပါပဲ
ငါတို့ရှိသမျှသည်မိသားစုကြီး ဖြစ်၍ ငါတို့တွင်ရှိသောသူငယ်ချင်းများ (စာဖတ်သူများဖြစ်ခြင်း) အားလုံးကိုကူညီလိုကြသည်😉
နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့် site ကိုမှကြိုဆို🙂
android mascot ကိုအန်ဒရိုစကီလို့ခေါ်တယ်
အဲ့ဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး၊ အန်ဒီ as လို့ပြောတာအမြဲတမ်းကြားဖူးတယ်
androski ကွန်ပျူတာကိုဘာလို့မကြည့်တာလဲ၊ ဒါဆိုမင်းတို့မြင်နိုင်တာပေါ့။ ငါထည့်လိုက်တယ်။ android mascot ရဲ့အရုပ်တွေရတယ်။
ပြီးတော့ငါသိချင်တဲ့ android pet အရုပ်တွေကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲknow😀
မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ Cerebroskys ကို transplantoskys အတွက်ဘယ်မှာရောင်းသလဲဆိုတာငါသိတယ်။
Artescritorio မှာသူတို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို ၀ င်ခဲ့ကြပြီးတော်တော်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ Droid ကိုပေးခဲ့တယ်။ သူတို့ (the admins) သူတို့ကသူတို့ eBay မှာ ၀ ယ်ခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်၊ သူတို့ကိုသင်ဆက်သွယ်နိုင်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ http://artescritorio.com/participa-en-el-concurso-de-screenshots-tematico-de-artescritorio
android mascot အတွက် androski ဆိုတဲ့အမည်ကိုဒီစာမျက်နှာများကနေတွေ့ခဲ့ရလို့သင်အရမ်းစိတ်ရှုပ်သွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်က Andy လို့ပြောပြီးငါလည်းစာမျက်နှာများစွာမှာတွေ့ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုလည်းငါထားခဲ့တယ်။
ဒီ post မှာတော့ဝီကီပီးဒီးယားနှင့်အခြားနေရာများတွင်ရှိသောအန်ဒီသည်အဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြချက်ကိုကျွန်ုပ်စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်တရားဝင် ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်ကိုအတည်ပြုရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။
Franco D ဟုသူကပြောသည်
သူ့နာမည်က Droid လို့ထင်တယ်၊ သူက Andru လို့ခေါ်တဲ့အခြားသူတွေလည်းကောင်းတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကစိတ်ဝင်စားနေတုန်းပဲ။ ငါပြီးသားသေးငယ်တဲ့ Android Speaker hahahaha ရှိသည်။ ဒီဖြစ်လာသည်ဘယ်လောက်အစွန်းရောက်။ ဘယ်သူ့ကိုမှမင်းရဲ့အရသာကိုပျောက်သွားစေမှာလဲ .. ဘယ်သူမှ (မျက်စိက troll ကိုမကျွေးဘူး ... ) အခြား MA Geeks များကစက်ရုပ်ကို ၀ ယ်ရန်အခက်အခဲရှိကြသည်။ သူတို့သည်စက်ရုပ်ထုလုပ်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ တက္ကသိုလ်၏ဗဟုသုတကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာလမ်းလျှောက်ပြီးပြီ၊ ပြီးတော့ android phone ကနေသူတို့ဘယ်နေရာကိုထိန်းချုပ်တယ်လို့သူတို့ထင်သလဲ !!
Franco D. သို့ပြန်သွားရန်
အန်းဒရိုစကီသည်အရုပ်၏အမည်၊ စုဆောင်းထားသည့်ရုပ်ပုံ၏အရ ... အန်းဒရွိုက် (စနစ်) ကဲ့သို့သောဆောင်ပုဒ်မဟုတ်ပါ။
aaaaa Bale ထို့နောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
တရားဝင် android စာမျက်နှာတွင်တရားဝင်အမည်မှာ Droid ဖြစ်သည်ဟုသူတို့ဆိုလိုသည်၊ ၎င်းတို့မှာမှတ်ပုံတင်ထားသည်။
တရားဝင်မှာ Google မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့နာမည်မရှိပါဘူး။ သူတို့ကသူ့ကို "Droid" ဒါမှမဟုတ် "BugDroid" နဲ့သူ့ခွေး "Alex" လို့ခေါ်လေ့ရှိတယ်။ BigDroid အပြင်ဘက်တွင်ပြသသောစက်ရုပ်။ ဒါ…။ အထက်ပါလင့်ခ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုလုံး၏ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးသောအခါ Droid ဟုတရားဝင်ခေါ်ဆိုသည်။
ဒီတော့ဘာကြောင့် Wikipedia မှာ "Andy" ဆိုတာဒီလောက်ကြီးတယ်။ LOL Uff ဘာရှုပ်ထွေး !!
Chido Carnal အလှူငွေ, အလွန်စပ်စုတကယ်တော့
Jjj curious data ကျွန်ုပ်ကွန်ပျူတာလောကသို့ ၀ င်ရောက်လာပြီး၊ os android cn Linux kernet (GNU / Linux) ၏ os android cn ၏ဤအချက်အလက်များကိုပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကောင်းတယ် အခုအရုပ်ကိုရှာဖို့ခေါ်တာကိုငါသိပြီ။ 🙂ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Debian Testing နှင့် LMDE တွင် Cinnamon 1.3.1 ကို Install လုပ်ပါ
Bricscad 12 အတွက် Linux အတွက်ရရှိနိုင်